Ry Hagara, andevovavin’i Saray, avy taiza ianao? Ny taranakao no homeko ity tany ity. Saiky nisy nandry tamin’ny vadinao ny olona, dia ho nahatonga heloka taminay ianao. Indro, Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Aoka anie mba tsy ho tezitra Hianao, Tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho:
Tsaroako izao ny fahadisoako: Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin’ny zava-manan’aina rehetra eo aminareo hatramin’ny taranaka fara mandimby: Lotana loham-pireneny sy Sobala loham-pireneny sy Zibona loham-pireneny sy Ana loham-pireneny 30 sy Disona loham-pireneny sy Ezera loham-pireneny ary Disana loham-pireneny. Solon’Andriamanitra, Odf nahamomba anao tsy hiteraka, va aho? Aiza ny vadiko, mba hanambadiako azy?
Jeosy loham-pireneny sy Jalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny.
Ary ny zanakalahin’i Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Mba omeo zaza aho, fa raha pd izany, dia ho faty aho. Tsy nisy vehivavy janga teo. Haringanao miaraka amin’ny meloka va ny marina?
Baigoly roa-polo no ho hita ao. Ataovy ihany araka izay nolazainao. Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Dia nianiana taminy izy; ka dia namidiny tamin’i Jakoba ny fizokiany.
Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; ;df pdt andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao.
Bilana sy Zavana ary Akana. Vadio ny vadin’ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao.
Tsy azonay atao ny hanome ny anabavinay ho an’izay lehilahy tsy voafora; fa fahavetavetana aminay izany. Itondray ombivavy kely efa telo taona Aho sy osivavy efa telo taona sy ondrilahy efa telo taona ary domohina sy zana-boromailala.
Endrey, mahatahotra ity fitoerana ity! Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak’io andevovavy io tsy hiray lova amin’ny zanako, dia amin’Isaka. Nanonofy aho, koa tsy misy mahalaza ny heviny; ary izaho nahare fa ianao, hono, raha mandre nofy, dia mahalaza ny heviny.
Ka ny zokiny hanompo ny zandriny.
Rien de tel qu’un bon livre avec du papier. Lea no anaran’ny zokiny, ary Rahely no anaran’ny zandriny. Lotana loham-pireneny sy Sobala loham-pireneny sy Zibona loham-pireneny sy Ana loham-pireneny 30 sy Disona loham-pireneny sy Ezera loham-pireneny ary Disana loham-pireneny. Le 03 Juillet 5 pages. Arosoy eto anoloako ary izato hazan’ny zanako hihinanako, mba hitsofan’ny fanahiko rano anao.
Angamba tsy hety hiaraka amiko ho amin’ity tany ity ny vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin’ny tany izay nialanao va aho? Dia nataoko teo anorony ny kavin’orona, ary ny haba teny amin’ny tànany. Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika baioly ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao balboly ranomasina sy ny voro-manidina sy ny pcf fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany.
Nanatona ahy ilay andevolahy Hebreo, izay nentinao ho eto amintsika, mba hisangy ahy; 18 ary rehefa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany eto anilako ny akanjony, ka lasa nandositra any ala-trano izy. Indro, tsy ho amin’ny tsiron’ny tany ny fonenanao, ary tsy ho amin’ny andon’ny lanitra avy any ambony; baiobly Fa ny sabatrao no hivelomanao, ary ny rahalahinao no hotompoinao; kanefa, raha mby amin’izay andro hahafahanao.
Anadahiko izy; koa tamin’ny fahatsoran’ny foko sy ny fahadiovan’ny tanako no nanaovako izany.
Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa nanambina ny alehako; alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko. Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Tsy hanome ahy na inona na inona ianao; raha hataonao amiko izao zavatra baioly, dia mbola handrasako sy hotandremako ihany ny ondry aman’osinao: Tsy mba handringana Aho noho ny folo. Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny.